जनस्वास्थ्य मापदण्ड - प्रधानमन्त्रीले त पालना गरेनन् ! जनता झन् के कम ? | GNN Nepal GNN Nepal जनस्वास्थ्य मापदण्ड - प्रधानमन्त्रीले त पालना गरेनन् ! जनता झन् के कम ? | GNN Nepal
कोरोनाको दोस्रो लहरसंगै हाम्रो ब्यबहार
असार अन्तिमसम्ममा ६ लाख भन्दा बढीलाई कोरोना सङ्क्रमित हुन सक्ने
वैशाख ७ गते, २०७८ २०:१९ मा प्रकाशित
अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा जनस्वास्थ्य विज्ञहरू चिच्याई चिच्याई भनिरहेका छन्, ‘कोरोनाको दोस्रो लहर आइसक्यो।’ कोरोनाको नयाँ भेरियन्टले इन्ट्रि मारिसक्यो । सरकार र जनता दुवैले सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । तर अटेर गर्ने नेपालीहरूको आम प्रचलन जस्तै हो । किनकि जुन उद्देश्यले हिजो सरकारले कोभिडको नयाँ मापदण्ड तोकेको थियो त्यसलाई पालना गर्ने कुनै एक नागरिकबाट पनि प्रयास समेत भएन । सरकारले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्न, सवारिसाधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु नचढाउन, मेला, महोत्सव तथा मन्दिरहरूमा हुल नगर्ने तथा २५ जना भन्दा बढीको भिडभाड नगर्ने तथा खेलहरू दर्शकबिनै खेलाउन आदेश जारी गरेको थियो ।
तर आदेश जारी गरेको २४ घण्टामै के भयो पढौँ हैत :
सर्वप्रथम कुरा -राष्ट्रका अविभावक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको । कोरोनाको घटनाहरू बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा जारी गरिएको आदेशको उल्लङ्घन गर्दै बढो तामझामका साथ बालुवाटारमा राम सीताको पूजा गरे । २५ जनाभन्दा बढी मानिसको जमघट गर्न नपाइने स्वास्थ्य मापदण्ड थाहा हुँदाहुँदै पनि बालुवाटारमा ५० जनाको हाराहारीमा पूजा गरियो । सरकारले मास्क अनिवार्य लगाउन पनि भनेको थियो । तर आज बालुवाटारमा उपस्थित हुने मानुभावहरु कसैको मास्क हातमा झुन्डिएको थियो । भने कसैले एक कानमा मात्रै अडाएर आदि मास्क लगाएका थिए । त्यहाँ उपस्थित पत्रकारदेखी प्रधानमन्त्री पत्नीलाई समेत सामाजिक दुरी पालना गर्नुपर्छ भन्ने भनक समेत लागेको थिएन । बालुवाटारमा सहभागी हुनेहरु एक-अर्कोको सास सुन्निने गरि टाँसिएका थिए ।
यो वर्णन प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजना गरिएको ‘श्री सीताराम शोभा रथयात्रा स्थापना समारोह’ को थियो । जहाँ प्रधानमन्त्री स्वयमले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न बिर्सिएका थिए ।
अब लागौं त्रिदेशीय टी २० सिरिज अन्तर्गत आज भएको नेदरल्यान्ड् र नेपालबिचको खेलमा । सरकारले धेरै भिडभाड हुने क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै क्यानले आज स्टेडियममा दर्शकबिनाको खेल खेलाएको थियो । तर हामी खेलप्रमीलाई सरकारको नियमले कहाँ छुन्छ र ? कीर्तिपुरस्थित स्टेडियम त खाली नै थियो तर दर्शक भने बाहिर लटरम्म झुन्ड बनाएर झुन्डिएका थिए । कोभिड सम्बन्धी सरकारको मापदण्डलाई अवज्ञा गर्दै मानिसहरू स्टेडियम नजिकैको भित्ता र रुखहरूमा बेफिक्र घुइँचो लागेका थिए । महिला हुन् या पुरुष । युवा हुन् या वृद्ध त्यहाँ खेल हेर्न झुम्मिएका थिए ।
सामाजिक दुरीको त कुरै छाडौँ, मास्क समेत लगाएका थिएनन्, बरु चस्मा लगाएका थिए ।
र अन्तिम अर्को दृश्यको कुरा गरौं ।
बिहान साढे नौ बजेतिर प्राय बसहरू प्याक हुन्छन् । कोरोनाले दैनिक १२ सय देखी १७ सय मानिसलाई सङ्क्रमण गर्दा पनि सवारीसाधनको हालत उस्तै छ । सवारीसाधनमा नत स्यानिटाइज गरेको पाइन्छ । नत सह-चालकले कम मानिसहरु हुलेको । आज पनि त्यस्तै हालत थियो । बस, ट्याम्पु, माइक्रो सबैमा मानिसहरू कोच्चिएका देखिन्थे । मानिसहरूलाई कोरोनाको भय एक थोप्पो भएको जस्तो देखिदैन्थ्यो ।
यी त केवल आजका प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । साना पसल देखी ठुला होलसेलसम्म, रेस्टुरेन्ट देखी सार्वजनिक स्थलसम्म स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेको देखिदैंन । हुन पनि कसरी गरुन् प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफैँद्वारा आफैँले बनाएको नियम भङ्ग भएको छ । झन् हामी जनता के कम । मुलुकले दुर्भाग्य ।
१९३ बालबालिकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण
त्यस्तै, अर्कोतर्फ आज देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै १९३ बालबालिकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ० देखि ९ वर्ष उमेर समूहका ४३ बालबालिका र १० देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १५० जना बालबालीकामा कोरोना पोजेटिभ देखीएको हो ।
त्यस्तै मन्त्रालयको डाटा अनुसार कोरोना सङ्क्रमण हुनेमा वृद्ध भन्दा पनि बढी बालबालीका र युवा रहेका छन् । ३० देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका सबैभन्दा बढी ४१७ जना रहेका छन् ।
कुन उमेर समूहका कति सङ्क्रमित हेर्नुहोस् :
१० देखि १९ वर्षसम्मका १५० जना
२० देखि २९ वर्षसम्मका ३७० जना
४० देखि ४९ वर्षसम्मका ३१२ जना
५० देखि ५९ वर्षसम्मका १९३ जना
६० देखि ६९ वर्षसम्मका १११ जना
७० देखि ७९ वर्षका ५३ जना
८० देखि ८९ वर्षका १० जना
९० देखि १०० वर्ष उमेर समूहका तीन जना
भने उमेर नखुलेका पाँच जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
यो संगै आजको दिनमा कोरोनाको सङ्क्रमण हुने १७ सय ३६ पुगेको छ । देशमा हिजोभन्दा आज कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गैरहेको छ । भने बालबालीका देखी युवा उमेर समूहका संक्रमितहरु तीव्र गतिमा बडोत्तरि हुँदै छ । पहिलेको वर्ष सङ्क्रमण हुनेमा अधिकाशं वृद्धा थिए । तर यो वर्ष त्यसको ठ्याक्कै उल्टो छ । जसलाई स्वास्थ्यविद्हरुले पनि खतराको संकेत भएको बताउँदै आएका छन् ।
दैनिक ११ हजार सङ्क्रमित थपिन सक्ने
विज्ञहरू पटकपटक नेपालको हालत भारतको जस्तो हुन्छ भनेर सुझाइरहेका छन् । तर पनि मानिसहरू सजग भएको देखिएको छैन । आजै मात्रै भर्चुअल रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्ममा दैनिक ११ हजार सङ्क्रमित थपिन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । यसै गरी कोरोना सङ्क्रमण बढे र मानिसहरूले स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगरे जेठको मसान्तसम्म दैनिक जसो ११ हजार सङ्क्रमित थपिने मन्त्रालयले बताएको हो ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलका अनुसार दैनिक १६ सय कोरोना सङ्क्रमितलाई अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यद्यपि डाक्टर पौडेल भन्छन्, ‘यदि स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड र सरकारले हिजो जारी गरेको आदेश मान्ने हो भने सङ्क्रमण उच्च विन्दुमा नपुग्न पनि सक्छ ।’
डा पौडेलले अर्को डरलाग्दो प्रक्षेपण पनि गरेका छन् । उनले नयाँ भेरियन्ट रफ्तारमा दौडिए नेपालमा असार अन्तिमसम्ममा ६ लाख भन्दा बढीलाई कोरोना सङ्क्रमित हुन सक्ने अड्कल काटेका छन् ।
मप्रति रिस र इर्ष्याको सोच राख्ने दुईचार जनाले स्वत: हार खानेछन् : श्वेता खड्का
काभ्रेमा आइतबारदेखि एक साता निषेधाज्ञा
ओली भेटेर प्रचण्ड धुम्बाराहीमा, अनौपचारिक सचिवालय बैठक सुरु